ကောင်းကင်ဖြူ: မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ ရွေးချယ်မှု့...
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာ ညချမ်း လေးပါဗျာ …ဒီနေ့တော့ အလုပ်စောစောသိမ်းလို့အချိန်လေး ၇တာနဲ့ပုံပြင်လေး တစ်ပုံ ပြောပြချင်ပါတယ် ….
ဒီပုံပြင် လေးကို ကျနော် ၇န်ကုန်မှာ CBL တက်စဉ်တုန်း က ရန်ကုန် တက္ကသုလ် ရာမည ဆောင် ဘေးက happy hour (အခုတော့မရှိတော့ဘူးလို့ သိရပါတယ်) ဆိုတဲ့ ဆိုင်လေးမှာ ကျနော် တို့ သူငယ်ချင်း တစ်စုကို ကိုဇော် ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က ပြောပြတာပါ …
ဒီ ပုံပြင် လေးကို … ကိုဇော် ကမပြောခင် ကျနော် တို့သူငယ်ချင်းတွေ ကြားမှာ အငြင်းပွားနေတဲ့ အကြောင်းရာလေးတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ် ..
အဲဒီ ကြောင်းရာလေးကတော့ … ကောင်မလေးတွေဟာ မိမိအိမ်ထောင်ဘက် ကို ရွေးချယ် တဲ့ နေရာမှာ အချစ်ကိုဦးစားမပေးတက်ပဲ အချစ်ဆိုတာထက် .. မိမိဘဝ အတွက် လုံခြုံ စိတ်ချရတဲ့သူ … ပြည့်စုံတဲ့ သူ .. အားကိုးလောက်တဲ့သူ ကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်တက်တယ် လို့ဒီအဆိုကို ကိုဇော် ကပင်စပြောခဲ့တာပါ .…
သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ရှိတဲ့ ကောင်မလေးတွေ က .. အားလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး လို့ကိုဇော် ရဲ့ အဆိုကို
ကန့် ကွက် ကျတာပေါ့ …
ကျနော် တို့ ကတော့ ကိုဇော် ဖက်ကပေါ့ … အဲ့လို တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက် အငြင်းပွားနေတုံး ကိုဇော် ကအားလုံးကို မိန်းကလေးတစ်ရဲ့ ရွေးချယ်တက်မှု့ပတ်သက်ပြီး ပုံပြင်လေး ပြောပြမယ် … ဆိုပြီ … အောက်ပါ ပုံပြင်လေးကို ပြောပြပါတော့တယ် …
တခါတုန်းက A ဆိုတဲ့ ကောင်လေးနဲ့B ဆိုတဲ့ ကောင်လေးဟာ အရမ်းချစ်ကြတဲ့ ငယ် သူငယ်ချင်းတွေတဲ့
ချမ်းသာတဲ့ မိဘတွေ ကြောင့် အရာရာပြည့်စုံတဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ဟာ ညီကို အရင်းတွေ ထက်ကို ပိုချစ်ကြသတဲ့ ….
အယ် … တစ်နေ့ မှာတော့ အဲ့ဒီ ကောင်လေးနှစ်ယောက်ဟာ .....
C ဆိုတဲ့ ကောင်မလေး ကိုတူတူတွေ့ ခဲ့ကြပြီး မြင်မြင်ချင်း ချစ်မိ ဆိုသလို နှစ်ယောက် စလုံးက ကောင်မလေး အရမ်း ချစ်သွား ပါရောလေ …
အဲ့ဒီမှာ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် ကတိ တစ်ခုထားခဲ့ တယ်တဲ့ … ကောင်မလေး က တစ်ယောက် ယောက် ကို ရွေးချယ် ရင် သူတို့နှစ်ဦး အရင်လို ပဲ အခင်မင် မပျက် ဆက်လက်နေထိုင် သွားမို့ နဲ့ကောင်မလေးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အလေးထားမို့နှစ်သဘောတူခဲ့ပါတယ် …
ကောင်မလေး က လည်း ရွေး ရခက်တာ ပေါ့ … နှစ် ယောက် စလုံး ကလည်း အပြစ်ပြောစရာမရှိ
သူ့ အပေါ်ထားတဲ့ အချစ်တွေ ကလည်း တူတူ ဖြစ်နေတော့ကောင်မလေး က ရွေးရခက်နေတာပေါ့ …
ဒီလိုနဲ့အချိန်တွေကြာလာတော့ ကောင်မလေး က တစ်ယောက် ယောက်ကို တော့ ရွေးမှဖြစ်တော့ မယ်ဆိုပြီ ..
ကောင်လေးနှစ်ယောက် စလုံး ကို ခေါ်ပြီး ….. အခုသွားမဲ့ ခရီးက ပြန်လာရင် တစ်ယောက် ကို ရွေးချယ်မယ်
လို့ပြောခဲ့ သတဲ့ .. အဲ့ဒီမှာ ကောင်မလေးက ခရီးထွက်သွားတာပေါ့ ............................
ကယ် … ပုံပြင်က အခုမှ စ မှာနော် … အဲ့ဒီ သုံးယောက် ရဲ့ ကံတရား က ဒီလို လေးဖြစ်သွားပါတယ် ….
ကောင်မလေး က ခရီး သွားရင်နဲ့လမ်းမှာ လှေမှောက်ပြီ ရေနစ် ဆုံးသွာပါလေရော ဗျာ …..
ကောင်မလေး ဆုံးသွားတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းကို A ဆိုတဲ့ ကောင်လေးက အရင် သိပါ သတဲ့ ….
အဲ့ဒီ ကောင်လေးက ကောင်မလေးကို အ၇မ်း ချစ်လို့ချစ်သူနောက်ကို လိုက်ခဲ့မယ် ဆိုပြီ မြစ်ထဲ ခုန်ချ ကာ … သူလည်း ရေနစ် ပြီး ဆုံးသွားသတဲ့ ….
အယ် … B ဆိုတဲ့ ကောင်လေးကတော့ … အရမ်းချစ်ရတဲ့ ချစ်သူ နှင့် သူငယ်ချင်း ဆုံးသွားပြီ ဆိုတဲ့ သတင်းလည်းကြားရော ...... ရှုး သွားပါသတဲ့ ….
အဲ့ဒီ ရှုး နေတဲ့ ကောင်လေးဟာ ဆုံးသွားတဲ့ သူငယ်ချင်း အုပ်ဂှု နဲ့ချစ်သူ အုပ်ဂှု ရှေ့ မှာ နေ့ တိုင်း ပြန်လည်ရှင် သန် လာပါစေလို့ဆုတောင်းနေရှာ သတဲ့ ….
အဲ့လို နေ့ တိုင်း ဆုတောင်းနေလိုက်တာ ဘယ်လောက်တောင်ကြားသလည်း ဆိုတော့ နှစ် ပေါင်း ၄၀ တိတိ ကြားသွားပါရော ..ဗျာ ..
အယ် … အဖြစ်ပျက်အားလုံးကို သိတဲ့ မိုးနတ်မင်းကြီးက နေ့ တိုင်း ဆုတောင်းနေတဲ့ ကောင်လေးကို သနားလို့ဆိုပြီ သူ့ တန်ခိုးနဲ့အားလုံး ပြန်ပြီး အသက်သွင်း ပေးခဲ့ပါတယ် …
မိုးနတ်မင်းကြီး ရဲ့ တန်ခိုး တော် ကြောင့် …..
၁ … A ဆိုတဲ့ ကောင်လေး အ၇င်လို ပြန် အသက်ရှင်လာတယ် ….
၂ …. C ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးလည်း အရင်လို ပြန် အသက်ရှင် လာတယ် …
၃ … B ဆိုတဲ့ ကောင်လေး အရင်လို စိတ်ပုံမှန် ပြန်ဖြစ်သွားတယ် …
၄ … သုံးယောက် စလုံး သူတို့ဘာဖြစ်ခဲ့ တယ်ဆိုတာ ပြန်မှတ်မိစေတယ် …..
ကယ် … C ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးက … ဘယ်သူကို မိမိဘဝ လက်တွဲဖော် အဖြစ် ရွေး မလဲ ဗျာ …….
ဒီပုံပြင် လေးထဲ က C ဆိုတဲ့ ကောင်မလေး ရွေးချယ်မှု့ဟာ အများအားဖြင့် မိန်းကလေး တစ်ယောက် ရဲ့ ရွေးချယ်မှု့ ပဲ ဖြစ်ပါတယ် …
ကျနော် ရဲ့ blogger မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများနှင့် .. အထူးသဖြင့် မိန်ကလေး blogger များ ဖြစ်ကြသော သမီးစံ (အပျိုကြီး) ၊ အစ်မ စံပယ် ( Jasmine တောင်ကြီး ) ၊ မဒိုးတန်(မဒမ်ကိုး) ၊ အစ်မ အိပ့်မက်စေရာ ၊ အစ်မ jerry pigpig ( ခံစားမှု့ သံစဉ်) ၊ အစ်မကြီး ချော (အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) ၊ အစ်မ မိုးငွေ့ (မိုးငွေ့ နှင့်အတူ) ၊ မေတ္တာရိပ် …. တို့… ရေ …
C ဆိုတဲ့ ကောင်မလေး နေရာမှာသာ ဆို၇င် ဘယ်သူကို ရွေးမလဲ ဟင် … ဘာကြောင့် ရွေးတယ် ဆိုတာလေးပါ ပြောပြပေးပါနော် …
ပုံပြင်လေးရဲ့ အဖြေ ကို နောက်တစ်ပတ် မှာဖော်ပြပေးပါမယ် …
သိပြီးသား ဆို၇င်တော့ တောင်းပန်ပါတယ် ဗျာ ….
C.B.L အပတ်စဉ် (၉) ရာမညဆောင် မှ ကိုဇော် နှင့် သူငယ်ချင်းများ ကို အစဉ် သတိရလျှက် …..
Posted by မောင်ဘုန်း at 6:50 AM
အိမ်မက်စေရာ October 30, 2011 at 8:12 AM
မောင်ဘုန်းရေ ..အိမ်မက်က B ကိုရွေးမယ်ကွဲ့..သူက ချစ်သူတင်မက သူငယ်ချင်းအပေါ်မှာပါ ချစ်တဲ့ သစ္စာစောင့်သိသူဖြစ်တယ်..ကမူးရှုးထိုး နဲ့ စိတ်ဆုံးဖြတ်မမြန်ဘူးစဉ်းစားချင့်ချိန်နိုင်သူဖြစ်တယ်..ခံစားထိခိုက်မှုကြီးပြီး အချစ်ကြီးကာ အချိန်အကြာကြီး မပျောက်မပျက်ချစ်နေနိုင်မယ့်သူလို့ ထင်လို့ပါ..အချစ်ကြီးပြီး ကမူးရှုးထိုး နိုင်တဲ့သူဟာ ပြသနာတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ရင်လဲ.. ရှင်းပြရခက်တယ် နားလည်မှုရှိသယောင်နဲ့ ခွင့်မလွတ်တက်သူဖြစ်တယ်..
မောင်ဘုန်း October 30, 2011 at 8:19 AM
ဟုတ်ကဲ့ ... အစ်မအိမ်မက်စေရာ ကတော့ ...
အချစ်ကြီးပြီး ကမူးရှုးထိုး နိုင်တဲ့သူဟာ ပြသနာတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ရင်လဲ.. ရှင်းပြရခက်တယ် နားလည်မှုရှိသယောင်နဲ့ ခွင့်မလွတ်တက်သူဖြစ်တယ်.. ဖြစ်လို့B ဆိုတဲ့ ကောင်လေးကို ရွေးပါတယ် ...
ဒီနေ့အပျိုကြီး ဘာလုပ်နေလည်း သိဘူး အခု ထိ အဖြေ မလာသေးဘူးနော် ...
အစ်မ အိမ်မက်စေရာ .. ရေ အခု ရွေးချယ်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ .. နော် ..
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် October 30, 2011 at 11:42 AM
blackroze October 30, 2011 at 12:35 PM
B ဆိုတဲ့ကောင်လေးက ချစ်တဲ့စိတ်အပြင်
ဒါပေမဲ့ ပြန်လည်ရှင်သန်လာတဲ့ C ဆိုတဲ့
( ကျမခံစားချက်နဲ့တွေးမိတာကိုဘဲပြောမယ်နော် ..အဖြေမှန်ကိုတော့ ကျမလည်းမသိပါဘူး..)
B ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုတော့ တသက်လုံး
မိန်းကလေးတွေက ချစ်သူစီကနေ ကိုယ့်ကိုဘဲ
A က ကောင်မလေး မရှိတော့ဘူး လို့
B ကတော့ အစစအရာရာချင့်ချိန်စဉ်းစားတတ်တယ်
ဒါပေမဲ့...ကျမအထင်ပေါ့နော် A ကိုရွေးမယ်
မဒမ်ကိုး October 30, 2011 at 6:04 PM
ကိုရင့်ကိုရွေးထားပီးလို့ ရွေးလို့မှမရတော့တာ .
jasmine(တောင်ကြီး) October 30, 2011 at 10:35 PM
အချစ်ကြီးပြီး ကမူးရှုးထိုး နိုင်တဲ့သူဟာ ပြသနာကိုအမြဲ
မောင်ဘုန်း October 31, 2011 at 12:47 AM
ဟုတ်ကဲ့ ... အခုလို ရွေးချယ်ပေးတဲ့ သူ ကို မောင်ဘုန်း က အထူးပဲ ကျေးဇူး တင် ပါတယ်
အပျိုကြီး ထွက်ပြေး နေပါတယ် ... နောက်တစ်ကြိမ် ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ... အပျိုကြီး ၇ဲ့ ရွေးချယ်မူ့ကို လည်း သိချင်လို့ ပါ .....
အခုချိန်ထိ .. B နှစ်ယောက် A တစ်ယောက် ဖြစ်နေပါတယ် ...... ....
ကောင်မလေးတွေဟာ မိမိအိမ်ထောင်ဘက် ကို ရွေးချယ် တဲ့ နေရာမှာ အချစ်ကိုဦးစားမပေးတတ်ပဲ အချစ်ဆိုတာထက် .. မိမိဘဝ အတွက် လုံခြုံ စိတ်ချရတဲ့သူ … ပြည့်စုံတဲ့ သူ .. အားကိုးလောက်တဲ့သူ ကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်တတ်တယ်ဆိုတာ..အမှန်ပါပဲကွယ်း)
မောင်အေ နဲ့ မောင်ဘီနှစ်ယောက်ထဲက
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) October 31, 2011 at 6:40 AM
ဟင်.. ဘယ့်နှာကြောင့် ကျုပ်တို့က ဒီပြဿနာထဲ ပါနေရတာတုန်း
စီဆိုတဲ့ ကောင်မလေး လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေးပါစေကွယ်
တော်ကြာ ကိုယ်တွေ ပြောလိုက်လို့ သူ့မှာ ရွေးရခက်သွားမှဖြင့်။း)
ကဲ.. ဒီတော့လည်း မိစံပြောသလိုဘဲ... သူသေလို့လိုက်ခုန်ချတဲ့သူ...
သူသေလို့ နေ့တိုင်း အုတ်ဂူဘေးမှာဘဲ လာငိုတဲ့သူတွေကို မရွေးဘဲနဲ့. တစ်ခြားသော လူတစ်ယောက်ကို ရွေးသွားမယ် ထင်ပါရဲ့...
ကောင်မလေး စီတစ်ယောက် မှန်မှန်ကန်ကန် ရွေးချယ်သွားနိုင်ပါစေနော...